Unlead PhotoImpact ရယ် Flash ရယ်?? — MYSTERY ZILLION
Unlead PhotoImpact ရယ် Flash ရယ်??
November 2008 edited December 2008 in File Request
တောင်းဆိုချင်တာရှိ ရင်တောင်းဆိုနိုင်တယ်ဆိုလို့ တောင်းလိုက်ပြီနော် နောက်မှ အော်နဲ့ :))
ညီမ website ကို ခပ်လန်လန်လေးလုပ်ချင်တယ် ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလည်းမသိဘူး ။
အဲ့လိုနဲ့ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ် မေးကြည့်တော့ Flash နဲ့လုပ်တဲ့ Animation တွေဘာတွေထည့်တာဆိုလည်းကောင်းတယ်ပေါ့ ... အဲ့တာနဲ့ Google ကိုအလုပ်ပေးလိုက်တာ ထွက်လာတဲ့ Flash တွေက အားပါးပါး နဲတာမှမဟုတ်ပဲ ... ခုလောလောဆယ် အဲ့မှာတင် တစ်နေတယ် ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဘာ Flash မှန်းမသိလို့လေ ။ နောက်ပြီး ခုကျောင်းက Unlead PhotoImpact သင်နေတာလေးလည်းလေ့ကျင့်ချင်တာ Trial ကြီးပဲရလို့ ... Key လေးနဲ့တစ်ခါတည်းလိုချင်တာ ။ ရှိတဲ့သူတွေမျှကြပေးပါနော် ... ညီမက ဘာမှမသိဘူး ... သိတာက လိုချင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ် ။ အဲ့ Unlead PhotoImpact ရယ် Flash ရယ် ၂ခုလုံး Key လေးနဲ့တစ်ပါးထဲလိုချင်လို့ မ,စပေးကြပါဦးနော် ။ နောက်ပြီး Flash ကလည်းခုမှစသုံးမှာဆိုတော့ ခုမှ စလုံးရေ စ , ဆိုသလိုအနော် ဘာဆိုဘာမှတိဘူးဖြစ်နေတယ် ။ ကိုကို မမများ ကူကြပါဦးနော် ။
အားလုံးကို ကျေးဇူးထာ၀စဉ်ပါ :77:
Intel Pentium III compatible or above
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Windows XP Service Pack2Home Edition / Professional, Windows XP Media Center Edition, Windows XP Professional x64 Edition
750 MB available hard drive space for program and content files
True Colour or Hi-Color display adapter with 1024x768 resolutions or higher
В· Intel Pentium III, AMD Athlon 800 or above CPU
В· 512 MB RAM (for Windows XP), 1 GB RAM (for Windows Vista)
В· 750 MB available hard drive space for main program and content files
В· An additional 320 MB available hard drive space for bonus programs
В· True Color or Hi-Color display adapter with 1024x768 resolutions or higher
ကိုအိုင်းစတိုင်းရေ File တွေကခွဲထားတာဆိုတော့ ပြန်ပေါင်းရဦးမှာပေါ့နော် ။ ဘယ်လိုပေါင်းရမှာလဲဆိုတာ ပြောပြဦးလေ ။ ပို့မယ့်ပို့ ကတို့ရောက်အောင်သာပို့ပေးတော့နော်
Folder တခုထည်း download လုပ်ထားတဲ့ files တွေအကုန် စုထဲ့ပြီး ပထမဆုံး(part 1) rar file ကိုဖြေလိုက်တာနဲ့ files တွေ သူ့ဟာသူပေါင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
whatamess!:14: